Real Madrid Oo Heshay Warka Eden Hazard » Axadle Wararka Maanta
Real Madrid oo heshay warka Eden Hazard
Arbacadii, Real Madrid ayaa war wanaagsan ku aragtay xerada tababarka kooxda in Eden Hazard uu tababar la qaatay gabi ahaanba kooxda inteeda kale isla markaana uu qaab ciyaareed ku jiri karo safarka axada ee Eibar.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belguim, oo dhaawac muruqa ah ka soo gaaray Alaves bishii November 28, ayaa la filayay inuu maqnaado muddo labo bilood ah, laakiin wuxuu maalmihii ugu dambeeyay ku firfircoonaa qolka jirdhiska wuxuuna la tababbaray kooxda inteeda kale.
Guushii shalay ay ka gaareen Athletic Bilbao, fursad uma lahan inuu qeyb ka noqdo kooxda, laakiin ugu dambeyn wuxuu sugayaa inuu kusoo laabto garoomada Eibar, kaasoo laga yaabo inuu keydka kusoo bilowdo. haddii uusan haysan waqti badan oo uu ku soo kabto.
Kulankii Alaves oo uu dhaawac ka soo gaadhay muruqa lugta, Hazard ayaa dhulka ku dhacay isla markaana jilibka ku dhuftay daafaca isaga oo isku dayaya in uu ka hor istaago in uu dhaliyo markii ay kubaddu soo gashay aagga ganaaxa. Waxay ahayd bilowgiisii ​​seddexaad oo xiriir ah Real Madrid.
Real Madrid ma aysan fulinin rajadii Eden Hazard intii uu maqnaa wuxuu badiyay shan ka mid ah afartiisii ​​kulan ee ugu dambeysay.
Sikastaba, soo laabashada Hazard ayaa yareyn doonta farqiga u dhexeeya Vinicius Junior, Rodrygo, Asensio iyo Lucas Vazquez.